BaaristaQuraanka.BlogSpot.com - Quraanka yaa qoray?: Nin gacanta laga gooynayo, Hiiraan, Somalia
Nin gacanta laga gooynayo, Hiiraan, Somalia
Daawo maskiinkaan Soomaaliyeed oo xaday labo xabo oo rooti ah oo gacanta laga jarayo.
Posted by Maskaxda Xoree at 7:38 AM
Labels: al shabaab, dhagax lagu dilay, gacan goyn, somali, somaliya
Stacy aka Fahiima May 15, 2010 at 7:49 AM
Dambi dhaaf ku ma jiro diinta islaamka.
Maskaxda Xoree May 15, 2010 at 12:44 PM
Haa walaal, diinta islaamka wax naxariis ah uma fidiso masaakiinta khaldamta. Diinta islaamka waxey ku saleysan tahay dhaqankii carabta ee qarnigii 6-aad. Waa nasiibdaro in dhaqankii hore ee carabta ahaa oo arxandarada ahaa wali lagu dhaqmo maanta oo sadanka yahay 2010.
Dadbey falalkaan naxariisdarada ah caadi la tahay oo u arka in ay sax tahay. Waa yaab.
Reer xamarka waxay ku maah maahaan "cimrigaadoo dheeraada wuxuu ku tusaa geel dhalaaya"
Stacy aka Fahiima May 15, 2010 at 11:31 PM
If you live a long life you will see a camel giving birth. Waa maahmaah cajiib oo qaalisan.
ilaaha maxamad waa ilaah noocee ah?